Search WeeB Myanmar Sub - BajarFB.com
Search Results - WeeB Myanmar Sub
Nigeru wa hajidaka yaku ni tatsu အပိုင်း - ၆
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu မြန်မာစာတန်းထိုး (ဂျပန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) We married as Job. အပိုင်း - ၆ ======= အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမ ဆက်ဆံရေးအပြင် တစ်ပတ်တစ်ခါ ပွေ့ဖက်ကြတာ တိုးလာတဲ့ ဟိရမဆ နဲ့ မိကုရိ တို့နှစ်ယောက်အတွက် နောက်ထပ်ကျော်ဖြတ်စရာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ လက်ဆောင်ရတဲ့ ခရီးသွားလက်မှတ်နဲ့ နှစ်ယောက်အတူ အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခန်းရေပူစမ်းဆီ သွားကြရမှာပါ။ မသွားလို့လည်း မဖြစ်တော့ အလုပ်ခွင်ကနေအပန်းဖြေခရီးလို့ သဘောထားပြီး သွားကြပေမယ့် ရောက်တော့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးက ခန့်ခန့်ညားညား စောင့်ကြိုနေပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် မိကုရိတစ်ယောက် သူ့ဘက်ကချည်း အမြဲတမ်း စပြောနေရတဲ့အဖြစ် ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိရင် သူတို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲဆိုတာ မရေမရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Download Link 226MB (Mediafire) http://www.mediafire.com/file/6816lid8hiyqxw5/Nigeru_wa_Haji_da_ga_Yaku_ni_Tatsu_ep06_mm_sub.mp4 အပိုင်း ၇ ကို လာမယ့် ကြသပတေးနေ့ တင်ပါမည်။ အပိုင်း ၁ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/849599695143728/ အပိုင်း ၂ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/850707468366284/ အပိုင်း ၃ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/852240231546341/ အပိုင်း ၄ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/853699928067038/ အပိုင်း ၅ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/855162474587450/ ( သတိပြုစရာ ။ ။ မိကုရိဟာ အရမ်းစိတ်ကူးယဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပြောပြနေတဲ့ဟန် စိတ်ကူးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခဏခဏ ရုပ်သံအင်တာဗျူးလွှင့်နေသလိုမျိုး၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်နေသလိုမျိုး ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါလာရင် စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ) Review ဖတ်ဖို့ > https://www.facebook.com/motaku.club/posts/1359953037382187 WeeB Myanmar Sub 16 Jan 2017 · 13K views
Nigeru wa haji da ka yaku ni tatsu epi10 MMsub
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu မြန်မာစာတန်းထိုး (ဂျပန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) We married as Job. အပိုင်း - ၁၀ ======= မိကုရိနဲ့ ဟိရမဆ တို့ရဲ့အချစ်ဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့နေပြီး ဇာတ်ရှိန်ကတော့ အထွတ်အထိပ် ရောက်နေပါပြီ။ လက်ထပ်ဖို့ porpose လုပ်တာတောင် ပလန်တွေနဲ့ ချည်ကပ်တဲ့ လူပျိုဆရာကြီးကြောင့်ဂွကျလှပါတယ် .. တစ်ဖက်မှာလဲ ကဇမိ နဲ့ ယူရီတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အချစ်ဖက်ကိုဦးတည်လားမလားဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီ။ နောက်တစ်ပိုင်းက ဇာတ်သိမ်းပိုင်းဆိုတော့ Weeb ပရိသတ်ကြီး မပျက်မကွက်အားပေးကြပါဦး။ Mediafire Download Link>>> http://www.mediafire.com/file/3uclucf88sru171/Nigeru_wa_Haji_Ep10_WeebMMsub.mp4 *အပိုင်း ၁၁ (ဇာတ်သိမ်း) ကို လာမယ့် သောကြာနေ့ တင်ပါမည်။ အပိုင်း ၁ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/849599695143728/ အပိုင်း ၂ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/850707468366284/ အပိုင်း ၃ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/852240231546341/ အပိုင်း ၄ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/853699928067038/ အပိုင်း ၅ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/855162474587450/ အပိုင်း ၆ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/856124107824620/ အပိုင်း ၇ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/857678674335830/ အပိုင်း ၈ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/858648004238897/ အပိုင်း ၉ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/860166980753666/ ( သတိပြုစရာ ။ ။ မိကုရိဟာ အရမ်းစိတ်ကူးယဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပြောပြနေတဲ့ဟန် စိတ်ကူးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခဏခဏ ရုပ်သံအင်တာဗျူးလွှင့်နေသလိုမျိုး၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်နေသလိုမျိုး ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါလာရင် စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ) Review ဖတ်ဖို့ > https://www.facebook.com/motaku.club/posts/1359953037382187 WeeB Myanmar Sub 25 Jan 2017 · 124K views
Chihayafuru Live-action မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကား
Chihayafuru - Kami no Ku မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကား (By WeeB) (ခဏခဏမေးကြတဲ့ Facebook ပေါ် video နဲ့တင်တာကို စမ်းကြည့်နေပါတယ်။ အဆင်ပြေရင်တော့ ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်) ဒီကားလေးကတော့ နာမည်ကြီးပြီးသား Anime/Manga ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ တော်တော်များများလည်း သိကြပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ ကရုတ (Karuta) လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ရိုးရာကတ်ကစားနည်းကို အခြေခံထားတဲ့အတွက် ပိုထင်ရှားပါတယ်။ ကရုတ ဆိုတာကတော့ ရှေးရိုးရာကဗျာအပုဒ်တစ်ရာ ပါဝင်တဲ့ကတ်လေးတွေနဲ့ ဆော့ရတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုပေါ့။ ရိုးရာကတ်ကစားနည်းဇာတ်လမ်းမို့ ပျင်းစရာကြီးလို့လည်း မအောက်မေ့လိုက်ပါနဲ့ဦး။ Teamworkအသားပေး အားကစားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုလို့ရသလို သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်လည်း ပါတယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလည်း ပါသေးတယ်။ Chihaya ဟာ ကရုတ ကိုငယ်ငယ်ကတည်း ရူးသွပ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ အထက်တန်းကျောင်းရောက်တော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကရုတအသင်းကို ဖွဲ့စည်းဖို့အားထုတ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါမယ့်လူမရှိတော့ လူငါးယောက်မပြည့်ပြည့်အောင် စုပြီး၊ သူ့ကိုကူညီသူက ငယ်သူငယ်ချင်း ကရုတကစားဖော်ဖြစ်တဲ့ Mashima Taichi။ Chihaya ဟာ သူမရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ဂျပန် ကရုတ Queen ဘွဲ့ရဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိသလို ကရုတဆက်ဆော့နေရင် သူတို့ကရုတကစားဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ထဲက ကွဲကွာသွားခဲ့ရသူ Arata နဲ့ တစ်နေ့ပြန်ဆုံရမယ်ဆိုတာကလည်း သူမအတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Part2ကြည့်ရန် https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/792743040829394/ Part 1 ဇာတ်ကားဒေါင်းလုပ်ရန် Link (720p- mp4 - 680MB) Mediafire link http://www.mediafire.com/file/5ya49liapzxsvfz/ChihayaPart1.weeb.mp4 WeeB Myanmar Sub 26 Oct 2016 · 39K views
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu မြန်မာစာတန်းထိုး (ဂျပန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) We married as Job. အပိုင်း - ၇ ======= ရထားပေါ်ကဖြစ်ရပ်အပြီး ဟိရမဆ တစ်ယောက် မိကုရိနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး၊ စိတ်တွေကယောက်ကယက် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ မိကုရိဘက်ကလည်း သိချင်စိတ်ကို ဖုံးဖိမရပေါ့။ အရေးကြီးတာကတော့ အလုပ်သဘောတွေ၊ စည်းမျဉ်းတွေက် တစ်ယောက်ခံစားချက်တစ်ယောက် နားလည်ပြီး၊ မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက် အလုပ်သဘောလက်ထပ်ခြင်းကနေ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလား။ Download Link 208MB (Mediafire) http://www.mediafire.com/file/9cndnd4psdt9nb6/Nigeru_EP07_WeebMMsub.mp4 *အပိုင်း ၈ ကို လာမယ့် စနေနေ့ တင်ပါမည်။ အပိုင်း ၁ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/849599695143728/ အပိုင်း ၂ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/850707468366284/ အပိုင်း ၃ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/852240231546341/ အပိုင်း ၄ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/853699928067038/ အပိုင်း ၅ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/855162474587450/ အပိုင်း ၆ ကြည့်ဖို့ https://www.facebook.com/WeeBMyanmarSub/videos/856124107824620/ ( သတိပြုစရာ ။ ။ မိကုရိဟာ အရမ်းစိတ်ကူးယဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပြောပြနေတဲ့ဟန် စိတ်ကူးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခဏခဏ ရုပ်သံအင်တာဗျူးလွှင့်နေသလိုမျိုး၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်နေသလိုမျိုး ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါလာရင် စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ) Review ဖတ်ဖို့ > https://www.facebook.com/motaku.club/posts/1359953037382187 WeeB Myanmar Sub 19 Jan 2017 · 11K views